ရှေးမြန်မာ..: ၁၅ရာစုနှစ် ပဲခူး မွန်လက်ရာ စဉ့်ကွင်း
၁၅ရာစုနှစ် ပဲခူး မွန်လက်ရာ စဉ့်ကွင်း
အမြင့် - ၄၁.၉၁ စင်တီမီတာ ( ၁၆လက်မခွဲ)
ဗျက်အကျယ် - ၃၀.၄၈ စင်တီမီတာ (၁၂ လက်မ)
ထုအထူ - ၅.၀၈ ( ၂ လက်မ )
Marilyn Walter Grounds ဆိုသူက ပြတိုက်ကို လှူဒါန်းခဲ့တာပါ။
ဒီစဉ့်ကွင်းကိုလေ့လာနေတာကြာပါပြီ။ ဓာတ်ပုံအမြင်အရ သိပ်မပျက်ဆီးသေးတာကို တွေ့ ရပါတယ်။ ၁၅ရာစုနှစ် ပဲခူး မွန်လက်ရာဖြစ်တယ်။ မာန်နတ်မင်းရဲ့ စစ်သည်တော်တွေအဖြစ်ပုံဖော်ထားတာပါ။ ၁၅ရာစုနှစ် ပဲခူး မွန်လက်ရာ စဉ့်ကွင်းတွေအကြောင်း အချက်လက်တွေကို အရင်ပိုစ်တွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ သတိထားစရာအချက်တချို့ကိုဘဲ အဓိကထားပြီး ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
အခုမြင်နေရတဲ့ စဉ့်ကွင်းကို အမေရိကန်နိုင်ငံ Los Angeles County Museum of Art မှာစုစောင်းထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အများပြည်သူ လေ့လာနိုင်ရန်ပြသထားတဲ့ ပစ္စည်းစာရင်းထဲမှာမပါဘဲ အခြားပဲခူးစဉ့်ကွင်းတွေနှင့်အတူ သီးသန့် သိမ်းထားတယ်။ ၁၉၈၇ LACMA ခုနှစ်မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ပြပွဲ ' Pal, Pratapaditya. Icons of Piety, Images of Whimsy. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, 1987 အခြားစဉ့်ကွင်းတွေနှင့်အတူပြခဲ့ဖူးတယ်။ ပြပွဲမှတ်တမ်း စာဆောင် စာမျက်နှာ ၁၀၃ ၊ color plate p. 32, cat. no. 67b မှာ Tile with Animal-Headed Demons, 1479 လို့ ဒီပစ္စည်းကို
အမည်ပေးထားတာ တွေ့ ရတယ်။
အမြင်အရ ဒီစဉ့်ကွင်းဟာ လုပ်လက်စ အပြီးမသတ်ရသေးပုံပေါ်တယ်။ မြင်နေကြမာန်စစ်သည်တွေအတိုင်း ခါးစည်းကလွဲပြီး အဝတ်မပါ။ ပုံဖော်ပြီးသား မြေသားအကြမ်းထယ်ကို စဉ့်ရည်သုတ်လိမ်းရာမှာ ရုပ်ပုံကိုယ်ထည်ကို အစိမ်းရောင်သုတ်လိမ်းတယ်။ စဉ့်ရည်သုတ်သူဟာ ခါးစည်းအဝတ်ကို တခြားအရောင်သုံးဖို့ တမင် ကွက်ပြီးချန်ခဲ့တာ လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ နောက်ခံ စဉ့်ကိုကိုယ်ထည်ပြားကိုလည်း အခြားအရောင်ပြောင်းသုံးပါလိမ့်မယ်။ နောက်တော့ မေ့သွားသလား ၊ အချိန်မရတော့လို့ဘဲလား မသိ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် သူ့အလုပ်ကို အပြီးမသတ်လိုက်ရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောနိုင်လဲဆိုတော့ အခြားပြတိုက်တွေမှာ ပြထားတဲ့ ၁၅ရာစုနှစ် ပဲခူး မွန်လက်ရာ စဉ့်ကွင်းတွေမှာ အရောင်တွေဖောဖောသီသီသုံးထားတာတွေ့ ရလို့ ပါ။
လူ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ တိရိစ္ဆာန်ခေါင်းတပ်ပေးလိုက်ပြီး မာန်နတ်မင်းရဲ့စစ်သည်တော်တွေကို သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘီလူး သဘက်တွေအဖြစ်ပုံဖော်လေ့ရှိတယ်။ အခုမြင်နေရတာကတော့ တောဝက်ခေါင်းနှင့်ဖြစ်တယ်။ မာန်စစ်သည်အများစုဟာ လက်နက် တစ်ခုခုကို ကိုင်စွဲထားလေ့ရှိပေမယ့် ဒီစဉ့်ပြားမှာ မပါ။ မေ့သွားသလားမပြောတတ်ပါ။ ရှေးပစ္စည်းတွေကိုလေ့လာရာမှာ ဒီလိုဘဲ လုပ်လက်စ အပြီးမသတ်ရသေးတဲ့ လက်ရာတွေအများကြီးတွေ့ ရလေ့ရှိတာကိုတော့ သတိထားပြီး လေ့လာနိုင်စေဖို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
Posted by ရှေးမြန်မာ at 8/29/2010
Labels: အင်းဝ၊ကုန်းဘောင် ၁၄-၁၈ ရာစု, ရှေးပစ္စည်း ကြည့်မယ်
ရှေးမြန်မာ January 21, 2011
ကျွန်တော် ဒေါက်တာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော့ ဘလော့ဂါ ပရိုဖိုင်း မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းပုံတင်ထားလို့ အမှတ်မှားတယ်ထင်တာဘဲ။ ဒေါက်တာသန်းထွန်းကို ပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနှင့်လေးစားတာရယ် ၊ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနတွေကို တန်ဖိုးထားတာရယ် ၊ သူလုပ်ခဲ့တဲ့ လမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်လုပ်ဖို့ မဟုတ်တာ မမှန်တာ တွေလျှောက်မရေးမိဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပေးလိုတာရယ် ကြောင့်ဘလော့မှာတင်ထားတာပါ။
အဝခေတ် ရှင်မဟာသီလဝံသ၏ ရွှေနန်းတည် မော်ကွန်း
မင်းတို့ ကျင့်ရာသော သင်္ဂဟတရားလေးပါးအကြောင်း